Lacagta Somaliland Oo Labedelayo Iyo Nooca Laga Dhigayo. | Baligubadlemedia.com
Lacagta Somaliland Oo Labedelayo Iyo Nooca Laga Dhigayo.
Guddoomiyaha baanka dhexe ee Somaliland Cali Ibaraahim Jaamac Baqdaadi, ayaa sheegay inay lacagta Somaliland u badali doonaan mid cusub oo balaastig ah sanadaha soo socda, si looga deeraado dhibaatooyinka soo gaadha lacagta marka la isticmaalayo.
Waxa uu guddoomiyaha baanka dhexe ee Somaliland sheegay in ay bedali doonaan haatan lacagta shanta boqol ah ee duugowday, isaga oo beeniyay inay qorshaha ugu jiro in ay soo daabacaan lacagta Somaliland oo ka kooban toban kun oo isku xidhan.
Guddoomiyaha baanka dhexe ee Somaliland Cali Ibaraahim Jaamac Baqdaadi oo qoraal uu soo saaray warbaahinta soo gaadhsiiyay waxa uu u dhignaa sidan“Baanka dhaxe ee Somaliland waxa uu bulshada u bayaaminayaa arimahan soo socda, ma jirto lacag cusub oo baanka dhaxe uu
soo daabacay oo ah nooc toban kun oo shilin ah, qorshihiisana kuma jirto inuu mustaqbalka soo daabaco lacag waraaqaha ah ee hada socota. Waana laga guuri doonaa sida ku cad qod.33 xeerka baanka dhexe ee xeer 54-2012 banigaga dhexe waxa uu xaq u leeyahay daabacaada lacagta dalka, waxa kale oo uu xaq u leeyahay inuu lacagta ku sii daayo xarumaha dhaxe,laamihiisa iyo wakiiladiisa si ay ugu wareegto dhamaan gudaha Somaliland.
Sida oo kale sida uu dhigaayo qod. 37 xeerka baanka dhaxe Somaliland waxa uu xaq u leeyahay inuu lacagta waraaqaha ah uu ku badalo lacag leeg oo lacag kale ah, isla markaasna u dhiganta hadii ay duugowdo ama ay baaba’do. Sida oo kale qod.38 ee xeerka baanka dhexe wax uu awood u siinayaa inuu suuqa ka saaro lacagta waraaqaha ah ee aan haboonayan ee duugowday,isla markaasna jeex jeexantay waxaanu ku badalayaa tiro lacageed oo u dhiganta.
Baanka ee Somaliland isaga oo waajibaadkiisa shaqo gudanaaya waxa uu awood u leeyahay inuu badalo lacagta shanta boqol ee shilin oo haatan duugoowday, haddii ay lacagta shanta boqol ee shilin ay suuqa ka baxdo waxa ay abuuraysaa sicir-barar oo alaabta uu qiimaheedu taagan yahay shan boqol oo shilin waxa ay tagi doontaa kun shilin, sidaas awgeed qofkiina haysta shan boqol oo shilin oo duugowday waxa uu baanka dhaxe ee Somaliland ogaysiinayaa in loo badali doono oo loogu badal doono lacagta uu badalanaayo qadar lacageed oo u dhigma oo ku kaydsan qasnadaha baanka si sharciga waafaqsan.
Banigaga dhexe ee Somaliland waxa uu hiigsanayaa inuu ka guuro lacagta waraaqaha ah ee hada ka socota gudaha Somaliland una guuro lacag balaastig ah taas oo ka fudud lacagta haatan dalka laga isticmaalana ka cimri dheer, waxaanu sheegay in qoshaa mustaqbalka ee baanku uu yahay in la soo daabaco lacag balaastig ah isla markaasna lagu badalo lacagta waraaqaha ah ee wakhtigan laga isticmaalo gudaha Somaliland taas oo mudo sadex sanadood ah qaadanaysa in lacagtaas lagu badalo mustaqablka”